Tips voor bloggen /
0.4 Waa maxay waxa ku jira xogta trefwoord?
0.5 Isticmaalida cilmi-baaris wax-tar leh oo lagu barto niche: Bandhig degdeg ah
1 Gaadiidka Gericht
1.3 3. Facebook-advertentie
Qaar waxay rabaan bilaw barta oo dakhliga qaar ka dhigo internetka. Kuwa boerenkool, si ay uga baxsadaan jahawareerka joogtada ah ee shaqada, ama si ay u balaadhiyaan ganacsigooda internetka, ama inay joojiyaan shaqadooda 9-ilaa-5, iwm.
Haddii aad hore u haysatid een Facebook-pagina (waxaad abuuri kartaa mid ka hor intaadan bilaabin blog, waa bilaash), meesha ugu horaysa ee aad eegto waa saldhiggaaga masraxaada. Ku qaybi qaar ka mid ah taageerayaashaas "profiel" oo fiiro gaar ah u leh niyadjabkooda (lab / dhedig, meelo, guursaday / hal / isqaba, da’da, iwm) iyo danahooda.
Wixii kuwa leh bogga Facebook, waxaad u tagtaa Insights> Overzicht> Te bekijken pagina’s. Tani waa halka aad ka heli karto oo is barbar dhigi karto boggaga la soo bandhigay ee Facebook. Waxaad riixi kartaa xiriir kasta si aad u ogaato fariimaha caanka ah ee lagu daabacay boggaan.
Raadi mowduucyada mawduuca ku saabsan niche – Waa maxay boodboodka ugu dambeeyay ee magaalada? Miyaad ka heli kartaa xagasha cusub ee blogka adiga oo eegaya isbeddelladan?
Ku balaarin kartaa niche cusub adoo eegaya dhaqdhaqaaqyada boerenkool ee ciyaartoyda – Tani waxay aheyd sidii aan u ogaaday nuqulka sawirada markii aan darsaday webka (CSS / jQuery / HTML5) blogs.
Dheecaan dheer ah sida erayga muhiimka ah ee erayga gaaban (tegoed: Soo dir Fox).
Waa maxay waxa ku jira xogta trefwoord?
Hase yeeshee, sida ugu aqoonta badan ee wax soo saarka ganacsadaha – waxaa jira waxyaabo badan oo ay ka muuqato xogta muhiimka ah. Iyada oo ku habboon qodobbada muhiimka ah, waxaan sidoo kale fahmi karnaa kuwa soo socda si ka fiican (iyo laga yaabo inay sidoo kale soo bandhigaan fursado ganacsi oo cusub):
Tusaale ahaan: Koobiyeyaasha – Nikon, Canon, Sony; Balaayiin Bale, Maldiven, Hawaii; voor webhosting – iPage, BlueHost, Hostgator; musharaxiinta – Taylor Swift, Linkin Park, Bruno Mars.
Isticmaalida cilmi-baaris wax-tar leh oo lagu barto niche: Bandhig degdeg ah
Markii aan bilaabay markii ugu horeysay, pa badan oo websaydh ah (warqad – markale ‘blogger’ ma ahayn erey caan ah) waxay ku tiirsan yihiin qalab la yiraahdo "Ouverture" – halkaas oo aad si fudud u geli karto ereyga raadinta iyo nidaamkuna wuxuu ku siin doonaa shakhsi adag inta jeer ee ereyga la baaro, bilaash ah. Ka dibna waxaan isbarbardhigi doonaa nambaradan natiijooyinka natiijooyinka soo noqnoqday oo ay xukumaan tartanka (iyo faa’iidada) ee niche.
Qorshaha Zoekwoord trefwoord Google waa mid ka mid ah qalabyada muhiimka ah ee aan weli isticmaalo maanta (haddii aad awoodi kartid inaad bixiso qalabka lacag bixinta, waxaan ku talinayaa AHREFS iyo SEM Rush).
Sawirada soo socda, waxaan soo bandhigi doonaa sida aan u isticmaalo qalabkaan si aan u barto niche oo aan u fasirno xogta la helay. Nidaamkani wuxuu qaadan karaa waqti aad u yar (ka yar saacadaha 30) ama waxay qaadan kartaa maalmo si loo dhammeeyo. Waxay ku xiran tahay inta ay le’eg tahay liiska muhiimka ah ee liiska muhiimka ah iyo sida qoto dheer ee aad dooneysid inaad ku nasto si aad u fahamto muuqaalka ganacsiga.
Sawirrada filimka ayaa had iyo jeer ahaa mid ka mid ah ururrada aan jeclahay. Anigu runtii ma soo aruurin, laakiin waan ku faraxsanahay farshaxanka iyo qiimaha dareenka ah. Aynu aragno haddii aan daneynayno fikradayda fikrada blogging faa’iido leh. Ogow in aanan samayn wax cilmi ah ka hor inta aanad qorin hage – sidaas ayaan ahay sida aad hadda xaq u leedahay.
Hoosudhaca, waxaan sidoo kale arki karnaa in inta badan dadka raadinaya inay ku yaalaan Mareykanka, Kenia, India, Australië, iyo Kanada.
Si aad u fahamtid jaantuska si wanaagsan, waxaan badanaa isbarbardhigaa raadinta raadinta aan la garanayn oo aan wax ka ogaanayo. Tusaalahan, waxaan ku darey ereyga raadinta "dib u eegista marti gelinta". Waxaad arki kartaa in dadkaas ay jiraan vader badan oo raadinaya "sawirada filimada".
Bogga ugu horreeya ee natiijada (fiiri sawirka hoos ku qoran) ayaa muujinaya in ay jiraan baaritaano fara badan oo loogu talagalay sawirada filimada (41.900 + raadinta bil kasta), sawirada filimka naxdinta leh (5.600+) filimada (3.400 + raadinta bil kasta), Hollywood sawirada filinka (1.600 + raadinta bishii), iyo wixii la mid ah. Sidoo boerenkool, waxaa sidoo boerenkool jira dalab aad u sarreeya oo ku saabsan macluumaadka ku saabsan abuurista sawirada filinkaaga (~ 22.000 bishiiba).
Miyeyn karnaa inaan iibinno niyaddeena raadinta (haddii qorshahayagu yahay inaan si toos ah u iibino sawirada filimada)? Sidoo boerenkool, xarumahani waxay noqon karaan mawduucyada bloggen.
Waxaa buurt ah in sawirada filimada jigsawaa ay tahay fikrad ganacsi oo wanaagsan.
Maxaa dhacaya haddii aan deurbideynin inaan iibino alaabta jireed? Waad ogtahay – ma ahan wax faa’iido leh iyo sahaydaba. Miyaan kaliya karnaa oo aan iibin karnaa booska xayeysiiska? Si aad uga jawaabto su’aashan, aan isku dayno raadinta khadka ah ee Google iyo arag haddii aan ku ogaan karno xayeysiiyaha ama barnaamijyada midnimada.
Sidoo boerenkool, waxaad fiirin kartaa habka suuq-xayeysiinta ee xayaysiinta – ma waxay ku xayeysiinayaan boogaha sare ee xayeysiisyada raadinta? Hadday sidaas tahay, nooca blogka? Ma iibin kartaa xayaysiinta si toos ah ganacsatadaas? Si looga faa’iideysto faa’iidada mawduucan, waxaan ku dari karnaa xogtan muhiimka ah ee loo yaqaan ‘Spyfu’ si loo ogaado inta xayeysiiyayaashu ay kharashka bixiyaan.
Si aad u sii dheeraato, waxaa laga yaabaa inaan dooneyno inaan qodno natiijooyinka raadinta bini’aadamka (xiriirrada bogga, bogsashooyinka bogga, saamiyada warbaahinta bulshada, iwm.) Si loo arko sida aay uah adah.
Hadda waxaan haysannaa dhamaan suuqyada lagama maarmaanka u ah – waa waqtigii la go’aansan lahaa. Miyay tahay inaan ku boodno? Tani miyuu wanaagsan yahay? Maxay noqon lahayd xagal wanaagsan oo la xidhiidha niche? Waan kuu dhaafi doonaa si aan u soo gabagabeeyo.
Qaar badan oo khabiiro ah waxay soo jeediyaan waxyaabo cusub si ay uga fogaadaan tartanka SEO tartan ee tartanka ah iyo inay qaataan bier yar oo yar yar marka la dooranayo niche.
Waxaan aaminsanahay in ka soo horjeeda dhabta ah. Waa inaad isku daydaa balli aad u ballaaran (shuruudaha raadinta bartilmaameedka leh dalab badan iyo tiro badan oo tartan weyn) sababtoo ah taasi waa meesha ay dhagaystayaashu iyo lacagku yihiin.
Waxaan haatan u dhaqaaqi doonaa qodob muhiim ah # 2: Taraafic Gericht
Waa xisaab fudud – Aan sheegno in aad maamusho blog-ka DIY oo aad ka iibiso farshaxanka gacanta. Qiyaasta celceliska blogda ee celceliska celceliska waa 3% celceliska qiimaha celceliska waa $ 25. waxay ahaan doonaan lix iibsasho iyo $ 150 way faa’iidi karaan wadada.
Si daacadnimo ah uma maleynayo in bloggers ay tahay inay waqti badan ku qaataan warbixinta Google Analytic.
Waa koewan ver lambarrada Google Analytics si ay ula socdaan:
Google Analytics (Qaadashada> Dhamaan Gaadiidka> Met Isha / Dhexe
Hadda oo aan ku dhaqaaqno istiraatiijiyadda guud, waa waqtigii aan ku fiirin lahayn xeelado gaar ah oo taraafik ah oo blog ah.
Furaha guusha, sida aan u arko, waxa ay raadineysaa blogyada saxda ah – kuwa haysta akhristayaasha dhabta ah iyo taageerayaasha warbaahinta bulshada. Waxaad isticmaali kartaa Topsy of Buzz Sumo si aad u aragto baloogyada caanka ah iyo saameyn ku yeelashada wershadahaaga. Ama, si sahlan ayaad u qaadan kartaa fiiro gaar ah qeybta faallooyinka si aad u aragto haddii akhristayaasha ay la falgalayaan kuwa wax qora. Had iyo jeer maskaxda ku hooi inaad wax ku dhajinayso akhristayaasha dhabta ah (sidaa darteed tayada waxyaabahaaga ay muhiim tahay). Ha ilaawin ku dhejinta dhejinta boggaga leh Google sare laakiin akhristayaasha eber – dhaqankan si fudud uma shaqeeyo 2015.
Facebook waa qaab kharash ah oo waxtar leh (waxay u socotaa sida hooseeya ee $ 0,06 / shabakad ku xiran tahay warshadaha qaarkood) si aad ugu qaadatid booqdayaasha cusub ee loogu talagalay. Qaybaha caqabadaha ku ah xayeesiinta Facebook waa inaad u baahatid inaad tijaabiso waxyaabo kala duwan (dalal kala duwan, dalal kala duwan, danaha kala duwan, iwm) si loo guuleysto.